Fankalazana ny fetim-pirenena faha-55 - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny 24 jiona 2015 maraina, manodidina ny tsangambato eo amin’ny gara no nosokafana tamim-pomba ôfisialy ny andro lehibe sady manan-danja eo amin’ny tantaran’i Madagasikara, dia ny 26 jiona izany izay hanamarihana isan-taona niverenan’ny fahaleovantena izany. Ny firedonana ny hiram-pirenena “Ry tanindrazanay malala ô” no nanombohana azy. Notohizana tamin’ny matso nataon’ireo foloalindahy, ny mpianatra, ny fikambanana maro samihafa izany. Tonga nanotrona sy nanome voninahitra io lanonana io avokoa ireo manam-pahefana avy ao an-toerana : ny lehiben’ny faritra, ny solombavambahoaka sy ireo manam-boninahitra miaramila sy sivily. Hipoka olona ny manoloana ny garan’Antsirabe ka ny ankizy sy ny tanora no ankamaroany. Ny volana jiona rahateo dia natokana ho an’ny ankizy mba hifalian’izy ireo miaraka. Seho goavana roa tonta ihany koa no nandravahana ny fotoana. Tarika mpihira gasy roa samy hafa no nalain’ny faritr’i Vakinankaratra, dia ny tarika Fara sy Mangan’Ambohimandroso sy ny tarika Ratovoson Ampahimanga. Samy nanao hira roa ny an-daniny sy ny an-kilany ka adiny iray sy sasany isaky ny ekipa no nomena ho faharetan’ny hira sy ny kabary. “Lakalaka ny eto an-tany”, io no lohatenin-kiran-dRafara sy Mangan’Ambohimandroso namohazan’izy ireo ny sain’ny mpijery. “Tsy vao izao no nisy an’izany, fa aza atao ambony ihany”, izany kosa no namalian’ny tarika faharoa azy rehefa vita ny anjaran’ireo avy any Ambohimandroso. Ny hira gasy toy itony no tena ankafizin’ireo raiamandreny, ary mendrika ho fankalazana ny fetin’ny fahaleovantenan’ny Malagasy araka ny nambaran’ny zokiolona iray avy ao an-toerana. Betsaka kosa ny zatovo no nanantena mpanakanto hojerena maimaim-poana eo anoloan’ny gara tamin’ity saingy tsy nisy izany. Ireo mpianatra ihany no nanao dihy mirindra sy seho miavaka toy ny fanofahofana sainam-pirenena lavabe miaraka omaly maraina. Nentina nanamarihana ny fanandratana ny maha malagasy avokoa izany rehetra izany satria tsy moramora hoy ity bekotro maroholatra iray ity ny tolona mba hiverenan’ny fahaleovantena.
Hambompo miredareda ny afomanga
Dikany karazany maro no nambaran’ireo olona momba ny afomanga izay napoaka ny 25 jiona hariva izay manerana ny Nosy. Fanandratana ny hambompo nahazoana ny fahaleovantena izay ao am-pon’ny Malagasy tsirairay no azo hibangoana ireo valinteny rehetra ireo. Midika ihany koa ny hafaliana sy haravoana tsy omby tratra. Ny 26 jiona 1960 no niverenan’ny fahaleovantena ka feno 55 taona katroka izany amin’ity taona ity. Andro lehibe tsy azo fafana ao amin’ny tantaran’i Gasikara ka rariny tokoa hoy Michel Ambalavato, solombavambahoakan’Antsirabe voalohany, raha hifety ny Malagasy rehetra. Ny afomanga no hampitovy ny hafaliana eto Madagasikara manerana ny distrika 119. Raha ny ao Antsirabe manokana, vao niandoha ny volana jiona dia efa tazana eran’ny tsena daholo ny harendrina sy ny kilalao kely toy ny vilany na fatapera tanimanga ho an’ny zaza ary ny tsipoapoaka na pétard. Navelan’ireo mpitandro ny filaminana ao Antsirabe malalaka tamin’ity ny fivarotana tsipoapoaka sy ny fanapoahana azy, raha toa ka nenjehina fatratra izany tamin’ny herintaona tahaka izao. Ny tsirairay no mila mitandrina araka izany satria manaitra ary mety hanapaka lalan-dra mihitsy aza ny firefotr’izy ireny. Na dia izany aza, tsy atao ambanin-javatra velively ny fanarahamaso sy ny fisafoana an’ireny elankelan-trano ireny hoy ireo mpitandro ny filaminana miaraka amin’ireo andrimasom-pokonolona, satria sarotra ny hanavahana ny fipoaky ny afomanga sy ny zavatra hafa mety hanakorontana ny filaminam-bahoaka. Ny filaminana no mbola olana fototra ankehitriny eto Madagasikara, andrasana ny vahaolana sy ny fiovana eto amintsika afaka rahampitso. 55 taona izay !